Duuliyaha Faransiiska ayaa laga yaabaa inuu ku ifiyo iftiin cusub helitaanka xashiishad caafimaad • daroogada Inc.eu
Duuliyaha Faransiiska ayaa laga yaabaa inuu iftiimin cusub u helo marin-u-helka xashiishadda caafimaadka
Mashruuca tijaabada ah ee xashiishadda daawada ah ayaa soconaya labo sano wuxuuna bartilmaameedsanayaa 3.000 oo bukaan ah oo la ildaran xaalado daran sida xanuun joogto ah iyo suuxdin. Tijaabadan dhowaan la ansixiyay waxay dhiirrigelin kartaa helitaanka bukaanka ee xashiishka caafimaadka ee Faransiiska iyo Yurub inteeda kale.
Bishii la soo dhaafay, dowladda Faransiiska ayaa saxiixday amar ay ku daahfureyso mashruuc tijaabo caafimaad oo xashiishad ah oo soconaya labo sano kaasoo lagu beegsanayo 3.000 oo bukaan ah kuwaas oo la ildaran xaalado halis ah sida xanuun joogto ah iyo suuxdin. In kasta oo markii hore loo qorsheeyay 2020, bilawga barnaamijka ayaa dib loo dhigay horaantii 2021 sababo la xiriira cudurka faafa ee COVID-19.
Cannabis daawo ah si loola dagaallamo xaaladaha halista ah
Tijaabadu waxay ku egtahay kaliya bukaanka qaba xanuunka 'neuropathic pain', noocyo daran oo dawooyinka u adkaysta oo suuxdin ah, xaalado xanuun leh iyo xanuun xoog leh oo ka yimaada cudurka 'sclerosis' ama cudurada kale ee habka neerfaha. Daaweynta la heli karo ayaa sidoo kale ka mid ah daryeelka taageerada ee kansarka daaweynta kansarka ama xanuunka kansarka. Bukaannada ku qoran barnaamijka waxay gebi ahaanba bilaash u leeyihiin alaabtan oo ah qaab ubaxyo qalalan iyo saliid. Tani waa barnaamijkii labaad ee tijaabada marijuana caafimaad ee Yurub oo dhaqan gala ka dib markii afar sano oo tijaabo ah laga bilaabay Danmark sanadkii 2018. Shuruucda iyo xeerarka deenishku waxay u oggolaanayaan dhakhaatiirta inay tijaabiyaan oo ay qoraan daawooyinka xashiishka ku saleysan.
In ka badan seddex meelood laba meel daawooyinka xashiishadda dawada ee Danmark waxay ahaayeen xaalado xanuun la xiriira, halka 18% daawooyinka loo qoray bukaanjiifka daaweynta suuxdinta. Wadar ahaan, 4.300 oo bukaan ah ayaa loo qoray xashiishad dawo ah tan iyo bilowgii barnaamijka.
1 Barnaamijka tijaabada xashiishka Faransiiska
2 Daneeyayaashu waxay ka xanaaqsan yihiin tijaabada daahitaanka
Barnaamijka tijaabada xashiishka Faransiiska
Barnaamijka tijaabada Faransiiska waxaa lala socon doonaa marxalad kasta si loogu oggolaado daraasado iyo falanqeyn dheeri ah. Diiwaangelinta kantaroolka qaran ee elektiroonigga ah ayaa loo dejin doonaa si ay ula socodsiiyaan dhakhaatiirta iyo farmashiyeyaasha ka qayb qaadanaya tijaabada. Cilmi baaristani waxay wadada u xaari kartaa sharciyeynta haramaha dawada. In kasta oo sharciyeynta buuxda ee xashiishka loogu talagalay ujeedooyinka caafimaadka ee Faransiiska ay umuuqato meel fog, barnaamijku wuxuu sidoo kale hagaajin karaa sumcadda marijuana caafimaad.
Bukaanku waxay u baahan yihiin rijeeto dhakhtar, halka wax soo saarka oo dhana ay u baahan yihiin ogolaansho Wakaaladda Badbaadada Caafimaadka Qaranka (ANSM) lana kulmaan heerarka dawooyinka iyo Tababbarka Waxsoosaarka Wanaagsan (GMP). Hirgelinta mashruuca waxaa sidoo kale ka horreeyay guddi xaqiiqo raadin baarlamaaneed oo ku saabsan isticmaalka xashiishka dawooyin, daryeel iyo ujeedo madadaalo.
Warbixin ku meel gaar ah oo ku saabsan sharciyeynta isticmaalka daweynta xashiishadda ayaa lagu qiyaasay in 700.000 bukaan ah oo ku nool Faransiiska ay u qalmi karaan daaweyntan. Wakaaladda dawooyinka ee Faransiiska ayaa u samaysay guddi gaar ah oo ku-meel-gaadh ah cilmiga sayniska (CSST) xashiishadda dawada si loo naqshadeeyo tijaabada.
Daneeyayaashu waxay ka xanaaqsan yihiin tijaabada daahitaanka
Go'aanka hirgelinta wuxuu yimid ka dib dib u dhacyo dhowr ah oo ka careysiisay ururada bukaanka iyo daneeyayaasha. Qoraal ra'yi ah oo lagu daabacay wargeyska Faransiiska bishii Sebtember Le Parisien la daabacay, 51 ka mid ah taageerayaashii ugu waaweynaa ee tijaabadan ayaa ku booriyay dowladda inay qaado tallaabo adag oo deg deg ah isla markaana ay dadajiso go’aanka.
Xubnaha guddiga la-talinta sayniska ee ANSM ayaa sidoo kale ku hanjabay inay is casilayaan, iyagoo ka baqaya dib u dhac hor leh oo ku yimaada hirgelinta cabirka. In kasta oo wareegtadan la soo saaray 7-dii Oktoobar, haddana welwelka ayaa wali jira oo arrimaha weli taagan weli lama xallin.
Maaddaama ay hadda sharci darro tahay in la beero ubaxa geedka hemp iyo sidaas awgeed daawada cannabis ee Faransiiska, mashruucu wuxuu ku xirnaan doonaa badeecadaha dibedda laga keeno. Alaab-qeybiyeyaasha awood u leh inay galaan tijaabada waxay ka faa'iideysan karaan faa'iidada ugu horreysa ee dhaqaajinta suuqa cannabis ee caafimaad ee soo ifbaxaya.
Waqtiga kama dambaysta ah ee dhinacyada daneynaya waa 24-ka Nofeembar. Alaab-qeybiyeyaasha la xushay waxaa lagu qiimeeyaa nidaamka dhibcaha. Si kastaba ha noqotee, ku tiirsanaantan dhoofinta waxay wiiqi kartaa horumarka qaybta dhabta ah ee Faransiiska. Tijaabadu sidoo kale waxay ku taagantahay ama ku dhacday miisaaniyad aad u tiro badan, taas oo loo baahnaa -15 20-XNUMX milyan, sida uu sheegayo Professor Nicolas Authier. Isagu waa gudoomiyaha gudiga latalinta sayniska ee ANSM ee ku saabsan xashiishadda dawada.
Read more euractiv.com (Xigasho)
cannabisEuropaFaransiiskasharci-dejintadaawodaawo cannabiscilmi baaris
CBD ma caawin kartaa daweynta niyadjabka?
Cannabidiol, ama CBD, waa dhisme dabiici ah oo si aad ah u koray sanadihii la soo dhaafay, qayb ahaanna waxaa mahad leh ...
Apple gebi ahaanba way ka mamnuucday barnaamijyada vape ka App Store
“Ilaa iyo hada, barnaamijyadan laxiriira faleebada looma heli karo ...